निजी क्षेत्र र कोरोना भाइरसबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई बचाउँदै लैजाने : चन्द्रप्रसाद ढकाल » aarthikplus
२०७७ मंसिर ९ गते, मंगलवार २०:३४ मा प्रकाशित
काठमाडौं : चन्द्र प्रसाद ढकाल चिनाई राख्नुपर्ने नाम भने पक्कै होइन सफल र खारिएका उद्योग व्यवसायीहरु बीच ढकाल चर्चाको शिखरमा छन्, भन्दा फरक पर्दैन । नेपाली उद्योग व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा २ पटक निर्विरोध निर्वाचित र एक पटक सबैभन्दा बढि मत ल्याएर बीजय भएर काम गरेको अनुभव ढकालसंग छ । सामान्य सानो पसलबाट व्यवसाय शुरु गरेका ढकाल अहिले ठूलो कर्पोरेट व्यवसायीदेखि मुलुककै सफल उद्योगीका रुपमा परिचित छन् भन्दा फरक पर्दैन ।
तपाईले उद्योगी व्यवसायीहरुको एउटा मात्रै छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी नेतृत्वमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवारी दिनुको कारण के हो ?
सरकार र निजी क्षेत्र बीच अहिले सम्बन्ध विग्रीएको देखिन्छ । तपाईले जिते राज्यसंग कस्तो सम्बन्ध हुन्छ र आम व्यवसायी साथीहरुका समस्या समाधान गर्न लाग्ने योजना के के छन् त ?
तपाईको चुनाव जित्ने बलियो आधार चाहि के हो ?
निर्विरोध हुने कुरा अब सकिएकै हो त तपाईबाटै पहल नभएको भनिन्छ नि ?
तपाई एउटा सानो व्यवसायबाट यहाँसम्म आएको व्यक्ति साना व्यवसायीहरुका समस्यालाई कसरी लिनु भएको छ त ?
कोरोना भाइरसका कारण साना व्यवसायीहरुको व्यापार ठप्प छ उनीहरुका पीडा धेरै छन् । उनीहरुका समस्यालाई चाहि कसरी लिनु भएको छ त ?
चुनावमा भोट माग्ने अनि जीते पछि जिल्ला र नगरका उद्योगी व्यवसायी साथीहरुलाई चटक्कै विर्सिने परम्परा छ नि होइन र ?
के तपाईले भने जस्तो सजिलै साना तथा मझैला व्यवसायीहरुका समस्या हल हुन्छ त ?
तपाई बरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि जिल्ला नगर संघका साथीहरुसंग कसरी सहकार्य गरि अगाडी बढ्ने योजना बनाउनु भएको छ त ?
कोरोनाबाट थला परेको पर्यटन व्यवसायीलाई माथी उठाउन पहल कसरी गर्नु हुन्छ त ?
नेपालमा धेरै आर्थिक विकासका सम्भावना छन् । तरपनि धेरै योजनाहरु ओझेलमा परेको अवस्था छ यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
तपाईका यी कुरालाई विश्वास गर्ने आधार चाहि के छ त ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति व्यवसायी नै हुनुपर्दछ भनिन्छ तपाईसंग यस्तो टिम छ त ?
तपाईले भने जस्तो टिम छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वाधार विकास गर्न र उनीहरुलाई जीवन्त राख्न तपाई निर्वाचित भएपछि कसरी अगाडी लैजानु हुन्छ त ?
अन्त्यमा तपाईका योजनाहरु के के छ त ?
गोर्खाज फाइनान्सको नाफामा १७८ प्रतिशतले वृद्धि
कालोबजारी आरोपी दुगड प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार, कारबाहीको साटो सम्मान
नेपाल मैदा उद्योग संघको अध्यक्षमा पुनः दुगड चयन